Ihowuliseyili yaseTshayina yonke indawo enamandla amakhulu kunye nokusebenza okuphezulu komfazi owakha ibhayisekile yombane kunye noMthengisi | IIMI
I-China yonke indawo ene-high-power kunye nokusebenza okuphezulu kwebhayisekile yombane
Nika amandla ukukhwela kwakho ngokuzonwabisa! Siphefumlelwe yimfuno ezandayo zawo onke amabala, sayila i-Escape njengeyona yokwenene yenze yonke i-e-bhayisekile. Ukusuka ekuhambeni ngenkalipho, kwindlela enye yokuhambahamba kwiindlela zomlilo ezijikelezayo phakathi kwewayini, i-Escape isekhaya kuzo zonke iintlobo zomhlaba. Amavili angama-26 × 4.0 abanzi kwaye azinzile, ukumiswa kabini kunye ne-Shimano 1 × 8-speed drivetrain zibonelela ngolawulo kunye nokuzithemba kuzo zonke iindlela ezinzima ngelixa i-48V 750W motor hub yangasemva ikunika isandla sokujonga okuninzi.
Sizibophelele ekuboneleleni ngexabiso elinobundlongondlongo, iimpahla ezikhethekileyo ezikumgangatho olungileyo, ngokufanayo nangokuhanjiswa okukhawulezayo kwe China onke amandla ombane kunye nokusebenza okuphezulu kwebhayisekile yombane, Njengoko sisiya phambili, sibambe iliso kukhula kwethu okuhlala kusanda Uluhlu lweemveliso kwaye luphucula iinkampani zethu.
Sizibophelele ekunikezeleni ngexabiso elinoburharha, iimpahla ezikhethekileyo ezikumgangatho olungileyo, ngokufanayo nangokuhanjiswa okukhawulezileyo I-China Electric Bike, Ibhayisikile yombane, Ngenxa yokusukela kwethu ngokungqongqo kumgangatho, nasemva kwenkonzo yokuthengisa, imveliso yethu iya ithandwa ngakumbi kwihlabathi liphela. Abathengi abaninzi beza kutyelela umzi-mveliso kunye nendawo yoku-odola. Kwaye baninzi abahlobo bamanye amazwe abeza kubona, okanye basithembe ukuba sibathengele ezinye izinto. Wamkelekile kakhulu ukuba uze eChina, kwisixeko sethu nakwimveliso yethu!
Inamandla iBafang yangasemva kwevili leMoto eneShimano 9 Gears
I-Calima eneemoto ezibuyela umva inikezela ngenkxaso enamandla kuzo zonke iimeko, ezinje ngemigama emide, ngokuchasene nomoya okanye ngokuchasene neenduli. Imoto ye-500W evela eBafang inamandla ngokwaneleyo kwaye ithembekile. Ngokudibanisa neegiya ezili-9 zeShimano kunye nesensor efanelekileyo yokujikeleza kwesono, i-calima inamava endalo okuhamba ngebhayisikile ngenkxaso yombane.
Umphambili kunye nomva weHydraulic disc iziqhoboshi zeCalima zifuna ulondolozo oluncinci. Iziqhoboshi zeediski zihlala zinamandla ngakumbi kwaye iibhuleki zincinci ngokukhawuleza xa kuthelekiswa nokuqhekeka komphetho.
Umboniso weLCD Unendawo ezi-5 zeNkxaso
Kwivili lokuqhuba kukho umboniso weLCD onokuthi ulawulwe ngenkxaso yombane. Izikhundla ezi-5 zenkxaso zinokusebenza ngokulula ngamaqhosha amabini. Umboniso ukhanyisiwe kwaye kulula ukusebenza. Ngokucinezela iqhosha ungafunda ulwazi oluninzi, njengesantya, umgama kunye nokusetyenziswa kwebhetri. Inkxaso iyema ngesantya esingaphezulu kwe-45 km ngeyure. Oku kugqitywe ngokusemthethweni. Umboniso unonxibelelwano lwe-USB ngasemva. Oku kukunika ithuba lokutshaja ifowuni yakho okanye ukukhangela xa uqhuba.
7 Isantya 1 × 7 Shimano AltusTZ25007428 Derailleur, 14-28 Cassette yezinyo
I-Neko, Iindebe zangaphakathi, Ethe ngqo 1-1 / 8 ″
I-CST 20 × 4.0-Ukuxhathisa okungafunekiyo
27.5 * 2.40
Sizimisele ukubonelela ngexabiso elinobundlongondlongo, iimpahla ezizodwa ezikumgangatho olungileyo, ngokufanayo nokuhanjiswa okukhawulezileyo kweeFektri zaseTshayina Zonke iiNdawo eziMandla aMandla aPhezulu eziSetyenzisiweyo zeBafang Hub Motor 750W Dual Battery 17.5ah 14ah Inyathelo leTyhini lamaFutha oBhayisekile, Njengokuba siqhubela phambili , Sibambe iliso kuluhlu lweemveliso zethu ezandayo kunye nokwenza uphuculo kwiinkampani zethu.
Iivenkile zeFektri China Electric Bike, Ibhayisikile yombane, Ngenxa yokulandela ngokungqongqo kumgangatho, nasemva kwenkonzo yokuthengisa, imveliso yethu iya ithandwa ngakumbi kwihlabathi liphela. Abathengi abaninzi beza kutyelela umzi-mveliso kunye nendawo yoku-odola. Kwaye baninzi abahlobo bamanye amazwe abeza kubona, okanye basithembe ukuba sibathengele ezinye izinto. Wamkelekile kakhulu ukuba uze eChina, kwisixeko sethu nakwimveliso yethu!
Egqithileyo I-48V 1000W enamandla e-Carbon Fibre yombane wamafutha iTire Bike yeNtaba
Okulandelayo: I-China mveliso yokuthengisa ngokuthe ngqo kwi-Samsung eyiyo ye-36V 13Ah i-lithium-ion ibhetri yebhayisikile yombane